Expatwoman Dubai - အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အလုပ်တစ်ခုရှာပါ
ဇန်နဝါရီလ 31, 2018
BlockChain အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် Cryptocurrency အလုပ်အကိုင်လမ်းညွှန်
မတ်လ 10, 2018
အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူသိများတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာသည်။ သငျသညျအိန္ဒိယဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးအမှု၌တည်၏။ ထိုအရှာဖွေနေ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်။ ကျိန်းသေ, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကြှနျုပျတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ပေးကွပါစို့။ ကျနော်တို့သူသည်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှာ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေ နှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အဓိကအားဖြင့်အိန္ဒိယကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကူညီပေးနေနေကြသည်။
ဒါကြောင့်သင်ကအလုံအလောက်လှုံ့ဆော်နေကြသည်လျှင်။ ကျနော်တို့နေရာချခံရဖို့သင်ကူညီနိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏အာရပ်ပြည်နယ်များ။ ခုနစ်လုံးကိုအာရပ်ပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော် 75k အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဝှမ်းအားမရနေကြသည်။ အဆိုပါအများစုဟာ ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး ကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ် ပြည်ပရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ပွုရနျသငျ့အားကူညီပေးပါမည်။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏အာရပ်ပြည်နယ်များအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြမ်းတွင်။ သင်ကမီးမောင်းထိုးမှာငှားရမ်းကြောင်းအနည်းငယ်အလုပ်ရှင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဲဒီမှာဥပမာတစ်ခုမှာရေနံကုမ္ပဏီများကဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများကဒီမျိုးကိုအလွန်ရေပန်းစားသည်။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားလုပ်သားအင်အားနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်မီ။ သင်ကအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ, အိန္ဒိယယာဉ်မောင်းလုပ်သားများ အမှန်တကယ်၌နေသောသူ အန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်နေရပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ ပင်လယ်ကွေ့ဧရိယာများတွင်ပိုမိုထက်7သန်းလုပ်သားများရှိပါတယ်။
အင်ဒီးယန်းများနှင့်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့။ အိန္ဒိယ Penisula ၏အာရပ်ပြည်နယ်များမှပြောင်းရွှေ့ start ကတည်းက။ သူတို့ကဒေသခံအမျိုးသားလူဦးရေဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ ကလေးတွေ Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူကြီးပြင်းခဲ့ကြ။ သို့သော်ငြားလည်း။ သငျသညျဥပမာကာတာနိုင်ငံပြောင်းရွှေ့အခါ။ ပတ်ပတ်လည် 10 နှစ်ကြာပြီးနောက်သင်ကာတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အပြောင်းအလဲများကို။ သင်သည်သင်၏အနာဂတ်များအတွက်အများကြီးတောက်ပလမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်လို့ပဲ။ ထိုအချိန်ကပိုပြီးဖြစ်ခြင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌သင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်အခြားအပြုသဘောနှစ်ဖက်အတက်အကျအများအပြား။
တစ်ခုမှာ GCC ၌သင်တို့၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာမြား။ Penisula ၏အာရပ်ပြည်ထောင်စုသင်တစ်ဦးရာသက်ပန်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာအသက်အဘို့အများအပြား options များပေးသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အမြင့်ပင်လယ်ကွေ့ပညာရေးစနစ်ကျိန်းသေသင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ သင့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိတောင်မှပိုကောင်းအနေအထား။ သငျသညျငယျရှယျဖွစျလိမျ့မညျနေချိန်မှာသင်အလွယ်တကူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကြောင်းအားလုံးသည်တစ်ချိန်ကမှာပါရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပေးခြင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွင့်အလမ်းပေါက်.
အများကြီးစုဆောင်းမှုရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအိန္ဒိယပြောင်းရွှေ့နေသောအေဂျင်စီများ။ နှင့်သင်တန်း၏, အရှေ့အလယ်ပိုင်းလျင်မြန်စွာဖြစ်လာသည်။ မြင့်မားတဲ့ paid နေရာလွတ်ရှာတွေ့များအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ။ ဖြစ်နိုင်သမျှတောင်မှအကောင်းဆုံး ဒူဘိုင်းအတွက်ရုံးများရှိခြင်းကုမ္ပဏီများမှ, ဒိုဟာ, ကူဝိတ်စီးတီး။ အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။
အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအများစုဟာ။ အလွန်ကောင်းစွာသိမှတ်ကြလော့ ကပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်လိုအရာဖြစ်တယ်။ သငျသညျဒူဘိုင်းနှင့်ဒိုဟာ၌အလွန်ကောင်းစွာအရည်အချင်းပြည့်အိန္ဒိယလုပ်သားများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာကစားသမားဘရှာဖွေနေသူ GCC နိုင်ငံများသို့လာကတည်းက။ အသစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအစဉ်အလာအစ္စလာမ္မစ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နေဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ အလွန်လူကြိုက်များပင်လယ်ကွေ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာများဖြစ်ကြသည် ဒူဘိုင်းမော်တော်ယာဉ်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ.
အစိုးရအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပစ္စုပ္ပန် တိုင်းပြည်အတွင်းအာဏာကိုအဆင့်မြင့်။ အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုလုပ်ခလစာ။ ထိုအ Penisula ၏အာရပ်ပြည်နယ်မဆိုအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်အခြေအနေများသင်တန်း၏။ အများကြီးဆွဲဆောင် အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကျော်လာ အဲဒီမှာတန်ဖိုးရှိ။ ဒီတော့ GCC နိုင်ငံများရှိတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အသိုင်းအဝိုင်းလည်းမရှိ။ သူတို့ဟာအခြားသူတွေကိုထုတ်အတွင်း၌ကြီးထွားကူညီရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အိန္ဒိယလုပ်သားများကိုအခြားသူများထက်မကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဆိုပါ ငှားရမ်းမန်နေဂျာအများဆုံးဖွယ်ရှိအာရှကိုယ်ရေးရာဇဝင် browsing သူတို့ကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာနေရာချပေးခြင်း။ သူတို့သည်ကောင်းမွန်သောပညာတတ်အမှုဆောင်များဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ် တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်။ နှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သားအင်အားငှားရမ်းများအတွက်တာဝန်ယူသောကုမ္ပဏီသစ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ကြိုးစားနေ။
အင်ဒီးယန်းထက်ပို7သန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒါကလက်ရှိ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်လုပ်နေ။ ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီ CVs စုဆောင်းနှင့်ပင်ကျော်လွန်သွား။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Indan ပြည်တော်ပြန်မသာငှားရမ်းကြသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းပါကစ္စတန်အဖြစ် ဒူဘိုင်းများအတွက် Philipino လုပ်သားများ။ နှင့်တောင်အာဖရိက။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စရှိခြင်းနေကြသည်။ ထိုအပေါ်အခြေခံထားပါသည်။
အထူးသဖြင့်အာရှကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်၏ဤမျှလောက်များစွာသော။ Received တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဟိုတယ်နှင့်အရောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သူတို့ထဲကအရေအတွက်ကရှိပြီးသားတဲ့အတှကျအပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အင်ဒီးယန်းပြည်ပရှိများအတွက်ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ် ကျနော်တို့ကူညီပေးနေလက်ပေးခြင်းနေကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နေရာတိုင်းအတူတူသင်ရွှေ့ဘယ်မှာနေပါစေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလဲ။ ရိုးရိုးသားသား, ထိုမြင်ကွင်းဆောင်းပါးများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွင်းသောအရာအတွက်မဆိုတခြားနိုင်ငံတွေအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာအလုပ်ရှင်များမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရောင်းဖို့ဘယ်လို ဥပမာ။ အဆိုပါ GCC မှရွှေ့မည်သူကိုတိုင်းအသစ်ကလူတစ်ဦး။ အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေအပေါ်ရွှေ့ဖို့ကိုသူတို့လမ်းကိုရှာဖွေရပေမည်။
အဆိုပါမေးခွန်းများကိုသာဈေးကွက်ကိုသိသူတစ်ဦးတို့ကဖြေကြားနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ် ?. အထူးသဖြင့်တို့ကဖြေကြားနိုင် ပင်လယ်ကွေ့မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါ်ဆိုခစင်တာများနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခု။ ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောအိန္ဒိယလူမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ?. ထိုအသေချာဘို့ပင်လယ်ကွေ့တွင်တည်းခိုခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေ။ သို့သော်ရှိသမျှသောအလုပ်ရှာဖွေသူစုဆောင်းခံရဖို့ကိုဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဘာဖြစ်သလဲ ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွင်ကျယ်စွာ? ။ အွန်လိုင်းစုဆောင်းခံရဖို့ကိုဘယ်လို။ အဘယ်မှာရှိကျွန်ုပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။
အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အများအပြားလည်းရှိပါတယ် သင်တို့သည်ငါတို့၏ပလက်ဖောင်း join သင့်ပါတယ်အသိုင်းအဝိုင်းရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်များ။ ဒါကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား, လမ်းသငျသညျသစ်ကိုအလုပ်အကိုင်အလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန်ရွေ့လျားစဉ်းစား start သငျ့သညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် အဘယ်အရာကိုနိုင်ငံပေါင်းအိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများနေထိုင်နေကြ.
သင်အလွယ်တကူအနည်းငယ်ကတခြားဆောင်းပါးတွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ gulf အလုပ်အကိုင်များနှင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအကြောင်း။ သို့သော်သင်သိဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် သင်ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ဖို့ရှေးခယျြသောအရပ်ဌာနကိုရောက်ရှိသည်အထိ။ အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်များမှာ ယူအေအီးအတွက်စူပါလူကြိုက်များ။
အလုပ်၏ပင်လယ်ကွေ့အပြုသဘော site ကိုအတွက်ဂျော့ဘ်
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ GGC ဘို့သင့်ကိုနေရာချချင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့အတွက်ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အသေးစိတ်ကို။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုမှတ်မိရပါမည်သည့်အရာတစ်ခုမှာ။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်အခါ။ သင်သည်သင်၏နေအိမ်တိုင်းပြည်ထက်အများကြီးပိုငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တို့သည်ငါတို့၏အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစျဆေးနိုငျတဲ့တကယ်တော့င် ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကိုလမျးညှနျ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏လုပ်အားခများပြားနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယကော်ပိုရေးရှင်းမှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ဤရွေ့ကားနံပါတ်များကိုသိသိသာသာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသော။
အလယျပိုငျး-class ကိုအလုပ်လုပ်အုပ်စုများအတွက်ဥပမာ။ သငျသညျအများအပြားကောင်းသောဇာတ်လမ်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်နေသောအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအကြောင်း အောင်မြင်မှုရဲ့သူတို့၏လမ်းကိုဖန်ဆင်း။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပုံပြင်များ၏နံပါတ်ရှိပါသည်အံ့အားသင့်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘယ်လိုအိန္ဒိယအမှုဆောင်အရာရှိဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရှိသည်အဘယ်ကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှေးခယျြ.
အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင့် ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးပါ။ မည့်အစား ဥရောပတိုက်တွင်အလုပ်လုပ်နေ ဒါမှမဟုတ်ယူနိုက်တက်စတိတ်။ သငျသညျပညာရှင်ပီသစွာသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးနိုငျပုံ၏ဥပမာတစ်ခုမှာ။ အထဲကအတွင်းပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ကတည်းက။ စိတ်ဝင်စားသူများနှင့်အလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့်နှစ်ဖက်တစ်ခုမှာနေကြတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကလုပ်သားများ။ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှနောက်ဆုံးတွင်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ။ ထိုအခါသင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ပညာရှင်များအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သားများနှင့်အတူစကားပြောအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအပိုရရှိပါလိမ့်မယ် တန်ဖိုးရှိသောအတှေ့အကွုံ.
သငျသညျစီမံခန့်ခွဲဘတ်ဂျက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မြို့တော်ရဖို့လုံလော ယခုသင့်ကိုယ်ပိုင်စတင် run။ သငျသညျကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာခက်ခဲကြိမ်, သင်တန်း, ရှိပါသည်။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုမှရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ။ ထထွန်းလင်းဖို့ဘယ်လိုအလွန်ကောင်းသောဥပမာကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြောင်းကျော်ကြားသော ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အမွကွေီးပျေါမှာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအရမ်းအမြော်အမြင်ရှိရှိရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့အဓိကပစ်မှတ်များနှင့်အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုဖြစ်လာချင်ပါတယ်ဆိုတာဘာလဲ?
ရဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေအများစုနေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ပါစို့။ ဥပမာအိန္ဒိယနေရာထိုင်ခင်းရန်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အိန္ဒိယအတွက်အဓိကမြို့မဆိုထက်အများကြီးပိုပိုက်ဆံဖြုန်း။ သငျသညျဝင်ငွေအဘယ်အရာကိုမအခွန်စရာရှိသောကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, နံပါတ်ထည့်ပါ။ ဒါ့အပြင် အလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရှုထောင့်ကသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုများမှာ။ Penisula ၏အာရပ်ပြည်နယ်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုဥပမာ။
အထူးသဖြင့် သငျသညျပြည်ပမှာရွှေ့နှင့်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ချင်သောအခါ,။ အနာဂတ်မှာပိုပြီးအဖိုးတန်ပါတယ်။ သင်တို့ပတ်လည် 40 အသက်အနှစ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ။ အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတဲ့လမ်းကြောင်းတာဝန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ ထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဆော်ဒီအာရေဗျအဖြစ်နိုင်ငံအများတဦးနှင့်အတူ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကခဲယဉ်းအလုပ်၏သင်၏အလုပ်ကယ်တင်နိုင်ပါ။
နောက်ထပ်ကောင်းသောစိတ်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာ နှင့်အိန္ဒိယငွေလွှဲပြောင်း။ GCC အတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့အခါ။ ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားမလိုအပ်ပါဘူး။ မည်သည့်အခွန်အခများပေးဆောင်စေရန်။ သငျသညျပိုက်ဆံဖြုန်းမတိုင်မီဒီတော့သင်ကကယ်တင်သင့်တယ်။ အိန္ဒိယဘဏ်အကောင့်မှပြည်ပမှာပိုက်ဆံပေးပို့ခြင်း။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည်ဤအမှု၌ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါပိုမိုမြင့်မား ပင်လယ်ကွေ့တွင်လစာ packages များ။ သငျသညျကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပိုပိုက်ဆံ။ အပြုသဘောဘက်တွင်သင်ပိုမိုပိုက်ဆံကယ်တင်ကြကုန်အံ့။
မှနိဂုံးမှ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိအိန္ဒိယများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ နှင့် GCC ။ GCC ၌သင်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်၏ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းခက်နှင့်သင်၌ရှိအများကြီးတန်ဖိုးကိုမမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးလူနေမှု၏ပထမဦးဆုံး2သို့မဟုတ်3နှစ်ပေါင်းမှာ။ အတွက်ကန်ဖို့အချိန်ကိုယူ။ သင်တစ်ဦးသည်အိန္ဒိယကွောငျးတှေ့စေခြင်းငှါ, လစာလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်မှနှိုင်းယှဉ်ဖို့အများကြီးပိုကောင်းခဲ့။ ထိုမှတပါး, လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုကောင်းမွန်အများကြီးပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အခြို့သောအချိန်စောင့်ပါ။ တချို့အတွေ့အကြုံကောင်းကိုရယူပါ။ သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံမြှင့်။
ထိုအခါသင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ကြတခါ။ မွို့၌ခိုင်မြဲစွာလူသိများကုမ္ပဏီအတွင်းမှာပဲ။ ရေရှည်မှာကိုသင်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးပိုပြီး Setup ဘဏ်လက်ကျန်ငွေရှိသည်။ နှင့်သင့် ဘတ်ဂျက်စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ သငျသညျအိန်ဒိယတှငျခဲ့ကြပေသည်ထက်တောင်မှအများကြီးပိုမိုမြင့်မား။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, သငျသညျလျှင် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပိုပြီး။ သင်ကတက်စစျဆေးသို့မဟုတ်ရိုးရိုး Google သို့မဟုတ် Facebook ပေါ်မှာအချို့သောအဖြေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်း။ သင်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရန်လိုအပ်သည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်း။ တပ်မတော်၌သငျယူတရိုက်ချက်များကဲ့သို့အကဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤစကားလုံးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသိပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
တောင်မှဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးရတဲ့။ ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သူတို့သည်သင့်အဘို့အမရအရပျ၌ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ရှုထောင့်အချို့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဟာ Arabic အဘိဓါန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ တောင်မှအိန္ဒိယတွင်, သင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်အဘို့ပြင်ဆင်။ သငျသညျချွန်ထက်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သင်အလုံအလောက်စမတ်စကားပြောရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ရူပါရုံကိုအတူလူတစ်ဦးကဲ့သို့အကြည့်ဖို့။ ထိုအခါအပြုသဘောဘက်တွင်မန်နေဂျာငှားရမ်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကျော်ကြားမှုသင့်ရဲ့ 30 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်အလုပ်ရှာဖွေသူအိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများ၏အချို့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရှာတွေ့မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျ GCC ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီ သင်တစ်ဦးစွန့်စားတာဖြစ်ကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ရဲ့ပေါ်မှာအချို့သောတန်ဖိုးကိုထားကြပါစို့။ နောက်ကျောကသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေမှရွေ့လျားအိန္ဒိယကနေပြည်တော်ပြန်၏ 40 ကျော်% ။ ယူအေအီးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီလွတ်ဘို့တိုက်ခိုက်နေခက်ခဲတကယ်ရှိပါသည်။ ထို့အပွငျကလူကိုလည်းကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ အခြားနိုင်ငံများကြောင်းအများကြီးလူကြိုက်များရှိခြင်းမရှိပါ။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယလုပ်သားများသည်အလုပ်ရှင်များရှာကြံတဲ့အခါမှာ အဲဒီမှာ။
အောက်ပါနှစ်များတွင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးထွားလာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီ။ စိတ်ဝင်စားသူနေရာပြောင်းရွှေ့သောနေရာများတစ်ခုမှာကူဝိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတိုင်းပြည်များတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအလုပ်သမားများက။ ယေဘုယျအားဖြင့်နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုနေကြတယ်စကားပြော။ အိုင်တီကဏ္ဍနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကူဝိတ်အတွက်ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်။ ဒါကြောင့်သင်လျှင် MBA ဘွဲ့ပညာရေးရှိခြင်း။ ဒါဟာကျိန်းသေသင်တို့အဘို့နေရာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကူဝိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခြေအနေများအင်ဒီးယန်းအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။
အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတိုင်းပြည်တွင်အများဆုံးသင်သည်ကိုက်ညီ။ ဒါဟာတကယ်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးအပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ ယူအေအီးအိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အ No.1 ဖြစ်လာ။ ့ကာတာနိုင်ငံပြီးနောက်။ သို့သော်ကာတာနိုင်ငံ၏အနုတ်လက္ခဏာဘက်ပေါ်မှာ။ သာစာချုပ်အလုပ်အကိုင်အဆိုပြုအလုပ်ရှင်အများစုဟာ။ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် ကာတာနိုင်ငံအတွက် 2022 ကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်စုဆောင်းနေသောဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ ကာတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်စာချုပ်အခွင့်အလမ်းများကိုအများစုဟာ။ သာအလုပ်ကမ်းလှမ်းမယ့်စာချုပ်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, တကကောင်းစွာ-paid တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အမြိုးသမီးတကျွမ်းကျင်သူများအကြောင်းကိုသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး နိုင်ငံပေါင်းပုံမှန်အရာဖြစ်လာသည်။ အခုဆိုရင်ပင်ဆော်ဒီအာရေဗျအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ drive ကိုပါ။ အကောင်းဆုံးကိုနိုင်ငံပေါင်းတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြည်ပရှိများအတွက် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့အဘူဒါဘီအတွက်အိန္ဒိယကနေအမျိုးသမီးတွေကိုကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း running ။
စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူပင် သငျသညျဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမှ reallocate လျှင်။ သင်သည်သင်၏ဇနီးဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာဖွေသူမ၏ကူညီပေးသည်။ ဒူဘိုင်းမှာတော့တော်တော်များများအလုပ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများအမြိုးသမီးတအလွယ်တကူအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အဲဒီမှာလည်းကြီးထွားလာနေပါတယ် ဒူဘိုင်းမြို့သမိုင်း ကြည့်ရှိသည်ဖို့ကိုလမ်းညွှန်။ သငျသညျကျိန်းသေမိန်းမတို့အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။
ပိုပြီးပွင့်လင်းနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ အဘယ်မှာရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမသည်နိုင်ငံခြားတွင်အလုပ်လုပ်တိုင်းပြည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုသုတေသနအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ကျနော်တို့ဆိုအလားအလာကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလုပျသမားအကြံပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘာရိန်းနှင့်အိုမန်အဖြစ်နိုင်ငံအများမှာကြည့်ကြစေရန်။ သငျသညျအတွေ့အကြုံကောင်းရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင် ခဏ၌သင်တို့အနေနဲ့အလုပ်အကိုင်အမှာစာကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှပြည်ပမှာရိုးရှင်းသော Starting Point သို့အလုပ်အတွက်။
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူအများစုဟာ။ ၏နေ့စဉ်သောက်သုံးသောကိုစစ်ဆေးခြင်း အိန္ဒိယဘွဲ့ရဘို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာများ GCC အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြရအောင်၊ လူအများအပြားဟာပင်လယ်ကွေ့မှာသာမာန်လုပ်သားတွေသာဖြစ်လာကြသည်။ သူတို့ကမရှာဘူး အသက်တာ၏ပိုကောင်းတဲ့လမ်းများအတွက်။ သူတို့ထဲကတချို့ကကိုယ့်ကိုစတင်ဖွင့်ပေးပါ။ အဘယျကွောငျ့ဖွစျဖြစ်ပါတယ် ?. ဘဝခက်ခဲသည် ဖြစ်. ။ ထိုအတိုးရန်မလွယ်ကူသောလမ်းလည်းမရှိ။ တိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံသားစီမံခန့်ခွဲထားပြီးအဘယ်အရာကိုရတဲ့များအတွက်ရေရှည်မှာ။ အဆိုပါ ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများကစူပါကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။ အောင်မြင်မှုမရှိလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ရှာဖွေခြင်းနှင့်များအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေ။ သင်တစ်ဦးရဲစွမ်းသတ္တိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျယူတိုင်းခြေလှမ်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်ကိုရှိပါတယ်။ ဖန်စီပြည်ပရှိဖြစ်လာတစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ Going နှင့်အခြားတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်ပါကလည်းယူမယ့်ခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမတိုင်မီနှစ်ကြိမ်ထင်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့မဟုတ်ကူဝိတ်တွင်နေထိုင်ကြသူအခြားလူများနှင့်ပြောဆိုပါ။ နည်းနည်းယူပါဦး ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက်လမ်းညွှန်များအပေါ်အမြင်။ ရှင်းမှ, ကကျိန်းသေပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ရကျိုးနပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်မှတက်သည်။
ပြည်ပမှာနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာရန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်။ ကောင်းစွာ-paid အလုပ်ယူအေအီးအတွက်လက်စွဲအလုပ်သမားစံအလုပ်အကိုင်များမှဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု၏အချို့တစ်လျှောက်ခြင်းငှါ, သငျသညျပြည်ပမှာနေထိုင်နေ start သည့်အခါ။ အများစုကိစ္စများတွင်ပါကရေရှည်မှာသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အင်ဒီးယန်းအဘို့အပင်လယ်ကွေ့ဂျော့သင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းကြသည်။
အများအပြားကအနုတ်ရမှတ်မရှိပါ။ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကယေဘုယျအားဖြင့်နေကြသည်စကားပြော နွေးနွေးထွေးထွေးကျွမ်းကျင်သူများယူပြီး။ ဥပမာအားဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအလွန်အမင်းရာအရပျတီထွင်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအမျိုးအစားမဟုတ်ပါလျှင် တမြို့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှာနေသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ Penisula နိုင်ငံများတွင်အာရပ်ပြည်နယ်သင်တို့အဘို့ကျိန်းသေဘူး။ ထို့အပြင်ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာနည်းနည်းအနုတ်လက္ခဏာအရာသငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖို့လိုအပျကွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အပေါ်မှာလက်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာရှိသည်ဖို့လိုအပ် ဘယ်လိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းခရီးစဉ်ကိုဗီဇာအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့.
ငါတို့သည်လည်းကြောင်းအိန္ဒိယအမှုဆောင်အရာရှိသာဤအချက်နှင့်အတူသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာအလုပ်အကိုင်အရယူခြင်း။ အခြားတပါးသောအမျိုးသားလည်းရှိပါသည် သူကို GCC အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုမှာပါကစ္စတန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ကွေ့စီးပွားရေးဧရိယာကတည်းကအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်တံခါးဖွင့်လှစ်ခဲ့။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကပါကစ္စတန်ပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်းစတင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကအလုပ်ရှာဖွေနေသူများအတွက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်ပင်။ သင်တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ကိုပြင်ဆင်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်။
ကောလဟာလသတင်းများအရသတင်းစာများထုတ်လွှင့်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့်စော်ဘွားဟိုတယ်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောအိန္ဒိယလူမျိုးအကြောင်းကို။ သင်ပင်ဒူဘိုင်းမြို့ကနေတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ပွဲချင်းပြီးတွင်, သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုကလူရဲ့ Arabic အဘိဓါန်ကြိုဆိုပုံကိုအိန္ဒိယအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဓိကခေါင်းစဉ်, ကြှနျုပျတို့ဆိုသညျကားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ အမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးလာပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများက။ ဒူဘိုင်းဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတွေးနိုင်ငံခြားကလူအများစုဟာ။ ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ရွေးချယ်မှုအဘူဒါဘီဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီထက်လူကြိုက်များကာတာနိုင်ငံအဆုံးအပေါ်ကူဝိတ်နဲ့ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်မှတ်မိရမယ် အင်ဒီးယန်းအဘို့အကြောင်းကိုပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ။ ဟိုတယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျိန်းသေသင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Burj al-အာရပ်ဟိုတယ်အထူးသဖြင့်ကတစ်လူလုပ်ကျွန်းပေါ်ဒူဘိုင်း၏ကမ်းလွန်ရပ်, ကကမ္ဘာ့အများဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ် !.
မကြာသေးမီကကိန်းဂဏန်းများအိန္ဒိယအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များထံမှလောလောလတ်လတ်ထွက်လာကြ၏။ နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ဒါရိုက်တာဖေါ်ပြခြင်း။ ထိုကောင်းမွန်သောလစာရယူခြင်း။ ထိုမှတပါး, 10 ကျော်% အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးတိုးတကျမှုလည်းမရှိ။ ဂရုမစိုက်ဘဲ အိန္ဒိယကနေပင်လယ်ကွေ့ပြည်တော်ပြန်။ သူတို့ကယခုအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးရတဲ့နေကြသည်။ ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယအစိုးရကအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အပြောင်းအလဲများကတိပေးထားတယ်။ သူတို့ကယခုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်သောပြဿနာ processing ဖို့မျှော်လင့် အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပင်ယူအေအီးအစိုးရအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ သငျသညျမီကပင်မမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးဆော်ဒီရှင်ဘုရင်နှင့်ကာတာနိုင်ငံနှင့်အတူငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်ကူညီသွားပါလိမ့်မယ် WhatsApp ကိုစုဆောင်းမှု။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိအိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက်အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေများတိုးတက်စေရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်။ ဒါ့အပြင်ဒူဘိုင်း၏အုပ်စိုးသောမင်းကို။ စကားလုံးတစ်လုံးအားပေးတော်မူပြီ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယကနေအလုပ်သမားများအတွက်.
အင်ဒီးယန်းအလုပျသမားမြားအတှကျပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ။ တယောက်ကိုတယောက်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့။ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်ရောက်ရှိသည့်အခါ။ သငျသညျအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလိမ့်မည်ဟုသံသယရှိစရာမလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ ပင် သင်၏ CV အတွက်အဆောက်အဦးထိတွေ့မှု။ ကျိန်းသေ, သင်စိတ်ကျေနပ်မှုတွေအများကြီးပေးပါ။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာနေနှငျ့သငျမိသားစုတစ်စု၏ကြွယ်ဝသောအမျိုးအစားကနေမလာကြဘူးအထူးသဖြင့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျပြောင်းရွှေ့လျှင်သင်နှစ်လယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မှာ hit သငျ့သညျ။ အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, သငျသညျလိမ့်မည် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်များ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းသားမှန်လျှင်။ အထူးသဖြင့် MBA ဘွဲ့ရကျောင်းကပညာရေးနှင့်အတူ။ သင်ကအလုပ်သမားလူတန်းစားကနေစတင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အတိုးတက်သောရှာဖွေ။ ဒီအခြေအနေကိုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာဘက်ခြမ်းတွင်။ ကံမကောင်းစွာပဲငွေကိုသငျသညျကိုမျှော်လင့်သောအရာကိုမပြုစေခြင်းငှါ။ သို့သော်သင်သည်တစ်နေရာရာကိုစတငျရပေမည်။ နောက်ပိုင်းပေါ်, သငျသညျအဘယျသို့ထက်ပိုဝင်ငွေနိုင်ပါတယ် အလုပ်သမားမန်နေဂျာ ဒီနေရာမှာရယူပါ။ သင်တို့မူကားလူနာဖြစ်ရမည်။ အနာဂတျအတှကျကြည်လင်သောရူပါရုံကိုနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ။
ရိုးရှင်းစွာကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload နှင့်တစ်ဦးကိုစတင်ရန် အသစ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ အဆိုပါအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာဒေသကြီးမှ - ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ